के थियो शीतल निवासमा भित्रिएको ब्रिफकेसमा ? - Asian Samachar
के थियो शीतल निवासमा भित्रिएको ब्रिफकेसमा ?
Asian Samachar बिहिबार, कार्तिक १८, २०७३ (1 year ago) भिडियो, मुख्य खबर
काठमाडौँ- भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तीन दिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रँदा स्वागतका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी उपस्थित थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मुखर्जीलाई आफ्नै गाडीमा राखी राष्ट्रपति भवन शितल निवास पुर्‍याइन्।
के हुनसक्छ त राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गराइएको त्यो ब्रिफकेसमा ? सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ।
तर शितल निवासमा भित्र्याइएको त्यो ब्रिफकेस हतियार हो कि हैन स्पष्ट छैन। तर दुई राष्ट्रपति औपचारिक स्वागत कार्यक्रममा व्यस्त रहँदा हतार हतारमा कुटनीतिक मर्यादा विपरीत त्यो ब्रिफकेस भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई किन शितल निवास प्रवेश गराउन हतार भयो ? यो प्रश्न अनुत्तरित छ।
एमालेको राष्ट्रवादी अडान नै जितको आधार– प्रदिप ज्ञवाली
सुरक्षा निकायलाई ‘हाइ अलर्ट’मा रहन गृहको निर्देशन
राज्यमन्त्रीको घरमा बम बिस्फोट, उम्मेद्वारको घरमा शंस्कास्पद वस्तु फेला
प्रकाशको निधनको शोकमा माओवादीले आज देशैभर श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने
राजपाद्वारा मधेसलाई अलग्गै राष्ट्र बनाउने आशयसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक बिहिबार, मंसिर ७, २०७४0responses
मेरो दोस्रो कार्यकाल सफल हुनुमा प्रकाशको महत्वपूर्ण भूमिका थियो–प्रचण्ड बिहिबार, मंसिर ७, २०७४0responses
धार्मिक आवरणमा महिलाहरुलाई यौनशोषण गर्दै आएका टुल्कु लामा पक्राउ बिहिबार, मंसिर ७, २०७४0responses
NDRC Nepal bags international award for bio-diversity conservation बिहिबार, मंसिर ७, २०७४0responses
बार्सिलोना र चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको नक आउट चरणमा प्रवेश बिहिबार, मंसिर ७, २०७४0responses
गृहमन्त्री विना वन्दैछ सुरक्षा रणनीति
राज्यमन्त्रीको घरमा बम बिस्फोट, उम्मेद्वारको घरमा शंस्कास्पद वस्तु फेला मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४0responses काठमाडौं, सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काको बागलुङ स्थित घरमा गएराति बम विस्फोट...
प्रकाशको निधनको शोकमा माओवादीले आज देशैभर श्रद्धाञ्जली सभा गर्ने मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४0responses काठमाडौं, पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष प्रचण्डको छोरा प्रकाश दाहालको निधनको शोकमा माओवादी केन्द्रले...